Semalt: विकीको बारेमा सबै उत्तरहरू कहाँ भेट्टाउने?
«सामस १० मिनेटमा विकिपेडिया आफूलाई सिकाउँछ» माइकल मिलर द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक हो। यसले विकिपेडियाको बारेमा हाम्रा प्रश्नहरूको स्पष्ट र व्यावहारिक जवाफ दिन्छ, र हामी दस मिनेटमा ज्ञानकोश कसरी प्रयोग गर्ने सिक्छौं। हामी विकिपीडियाको बारेमा जान्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा जान्न सक्छौं र यसको अविश्वसनीय र प्रसिद्ध संसाधनहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछौं। अहिले सम्म, माइकल मिलरले n ० नन्फिक्सन पुस्तकहरू र उनको बेस्टसेलिंगमा लेखेका छन्, र प्रख्यात शीर्षकहरू «स्यामस् सिचोन युट्युब यूट्यूबलाई १० मिनेटमा«, «गुगलपेडिया: द अल्टिमेट गुगल रिसोर्स, ed« स्पीड इट अप! ढिलो कम्प्युटरको वेगको लागि एक गैर-टेक्निकल गाईड, र कम्प्युटर बेसिक्सको लागि निरपेक्ष शुरुआतकर्ताको गाइड »। यस प्राविधिक शुद्धता, सत्य सहानुभूति, र उपयोगी सल्लाहका कारण यस लेखकले विश्वव्यापी ख्याति कमायो। उसले आफ्ना सबै पाठकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गरेको छ।
विकिपीडिया कसरी प्रयोग गर्ने?
Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक लीसा मिशेल, विकिपेडियालाई इन्टरनेटमा जानकारीको एक उत्तम स्रोतको रूपमा वर्णन गर्दछ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री योगदान र सम्पादन गर्न दिन्छ। प्राविधिक माग राख्ने जीवनशैली कायम राख्न तपाईले विकिपेडिया प्रयोग गर्नु पर्छ किनकि यो इन्टरनेटको सबैभन्दा नवीन र राम्रो ज्ञान भएको वेबसाइट हो। विकिपीडियामा ब्राउज गर्दा यो विकी होलमा पर्न सजिलो र सीधा छ। तपाईं हलिउड फिल्महरूमा उत्कृष्ट भूमिका खेल्ने अभिनेताहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि तपाईंले उनीहरूको पत्नीहरूको बारेमा खोजी सुरु गर्नुभयो र उनीहरू हाईस्कूलमा नपुगेको पाए र उनीहरूको क्यारियर एकदम चाँडै सुरु गरे। विकिपेडियाले भर्खर आफ्नो १th औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ, र साइटले बच्चाहरूलाई उनीहरूका कार्यहरू र गृहकार्य गरिरहेका जानकारी प्रदान गर्न सुरू गर्दछ। औंलाको टुप्पोमा डाटा र जानकारीको गर्तका साथ विकिपेडिया इन्टरनेटमा सूचनाको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। यसको संस्थापक, वार्ड कनिंघमले आफ्नो सृष्टिलाई सबै भन्दा सही र सरल डाटाबेसको रूपमा वर्णन गर्दछ जुन विभिन्न व्यक्तिको अपेक्षा पूरा गर्दछ।
माइकलले आफ्नो पुस्तकमा विकिपेडियालाई विभिन्न तहमा कक्षाकोठामा कसरी समावेश गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको परियोजनाहरूमा पूर्ण नियन्त्रण दिएर हामी उनीहरूलाई उपयोगी जानकारीको लागि विकिपेडिया जाँच गर्न आग्रह गर्न सक्छौं।
शिक्षकहरूको लागि शीर्ष तीन विकिपीडिया पृष्ठहरू
१. विकिसपेस: यो सेक्सन कक्षा कोठामा प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। विकिसपेस एक विशाल पृष्ठ हो जुन कक्षाकोठा व्यवस्थापन उपकरणको रूपमा कार्य गर्दछ र शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई कसरी उनीहरूको कक्षाकोठा कार्यहरू र प्रोजेक्टहरू राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सिक्न मद्दत गर्दछ। न केवल यसले धेरै जानकारी र टेम्प्लेटहरू प्रदान गर्दछ, तर यो नि: शुल्क पनि छ र असाइनमेन्ट उत्तरहरू धेरै छ। शिक्षकहरूले यस पृष्ठलाई कामहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन् र संसाधनहरू साझा गर्न सक्दछन्।
२.विकिडोट: आधारभूत स्तरमा, यो विकिपेडिया पृष्ठ प्रयोगकर्ताहरूका लागि नि: शुल्क छ, तर यसको केही सुविधाहरू र सामग्री भुक्तान गरिएको छ। यदि तपाईं पप-अप विज्ञापनहरू र ब्यानरहरू हेर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले यसको सदस्यता शुल्क तिर्नु पर्छ।
P. पीबवर्क्स: २,००,००० भन्दा बढी जोडिएको पृष्ठको साथ, यो विकिपेडिया पृष्ठले शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थी विकल्प केन्द्रित शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्ने धेरै विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। साथै, शिक्षकहरू र विद्यार्थीहरूले सजिलैसँग आफ्नै साइटहरू निर्माण गर्न सक्दछन् र परियोजनाहरू अनलाइन सिर्जना गर्न सक्नेछन् एक पटक उनीहरू यस पृष्ठमा सूचना मार्फत जान्छन्।
सल्लाह, सल्लाह, र माइकलको पुस्तकबाट विचारहरू लिएर, तपाईं सजिलै विकिपेडियालाई समाहित गर्न र आफूलाई इन्टरनेटमा व्यस्त राख्न सक्नुहुन्छ।